Nezvedu - Handan Jinggong Kuvaka Anchoring Kugadzira Co, Ltd.
Handan Jinggong kuvaka anchoring Kugadzira Co, Ltd.
Iri boka rekambani rinosanganisa kuwedzera bhaudhi nhevedzano, kemikari anchor bhaudhi dzakateedzana, simbi dhizaini yakakura hexagon nhepfenyuro, yakapetwa-kucheka kuchera muswe waya akateedzana uye anti-seismic rutsigiro akateedzana. Iyo ine yakazvimirira yekutsvaga uye kusimudzira, kumisikidza, kugadzira, dhizaini, kuyedza michina uye matarenda. Iyo kambani inonamatira kune "Seiko mhando" "Kuvimbika kwepasirese" bhizinesi uzivi, shingairira kugadzira yakanakisa mhando zvigadzirwa, shandira ruzhinji rwevashandisi.
Yakamutangira kambani iyi yaive Yongnian County Jinggong yekuwedzera bhaudhi fekitori, iyo yakavambwa nasachigaro Yang Xinsheng
Zvigadzirwa zvinonyanya kushandiswa mumakanika uye magetsi kudengenyeka kwenyika. Kana paine vibration yakasimba, kusuduruka kwenzvimbo dzekubatsira dzemagetsi nemagetsi zvinogumira, iko kudengenyeka kwenzvimbo kunodzorwa, uye mutoro unoendeswa kune akasiyana zvikamu kana zvishandiso pane chinotakura chimiro. Sayenzi nehunyanzvi zvinogona kudzora kudengenyeka kwenyika, kudzikisira kana kudzivirira kuitika kwenjodzi dzechipiri, kuitira kuchengetedza chivakwa kubva pakurasikirwa uye kushandira nguva yekutiza kwevashandi, iyo inoita basa rakakosha uye rakakosha pakuramba kudengenyeka kwenyika uye kuderedzwa kwenjodzi kwezvivakwa.
Isu tinopa dziviriro yakasimba uye yakavimbika yezvirongwa zvehurumende, nzvimbo hombe, zvivakwa zvekutengesa, mataundi epasi pevhu anoshandisa mugero, njanji yekufambisa, rutsigiro rwemaindasitiri uye mamwe minda yekushandisa ine yakakwana-dhizaini dhizaini uye chigadzirwa chinoenderana.
Kudiwa kwako ndiko kwedu kwese kutsvaga. Kambani yedu iri kuda kutanga ngarava pamwe nevatinoshanda navo kubva kumativi ese ehupenyu kugadzira ramangwana rakajeka!
Muna 1997, ndokunyora hunhu hwemhando yekuwedzera bhaudhi bhizimusi mugore rimwe chete. Iyi standard yave iri yemhando yepamusoro yeYongnian yekuwedzera bhaudhi, uye hapana munhu akaipfuura.
Muna 2002, zvakanyoreswa zviri pamutemo saHandan Jinggong anchor Kugadzira Co, Ltd.;
Muna 2003, yakaisa mari inopfuura mazana masere emamirimita muhuhuoju Street Development Zone, yakaisa mari yakawanda kuzivisa tekinoroji yepasirese uye matarenda, yakabudirira kugadzira akateedzana emakemikari anchor bolt zvigadzirwa, uye ikava yechitanhatu bhizinesi repamba kuzvimiririra kuburitsa kemikari chinotsigisa bhaudhi;
Muna 2007, yakaisa 22000 mativi emamirimita kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenzvimbo yekuvandudza, ichinyanya kuburitsa nekutengesa Kutengesa kweakakura mativi esimbi mamiriro, torsion shear bhaudhi zvigadzirwa, izvi zvakateedzana zvigadzirwa zvakafukidzwa nePICC, zvekuti sarudzo yako haina kunetseka!
Muna 2014, isu takagadzira uye takaburitsa mativi maviri anocheka ekuchera muswe waya, uye tikanyorera iyo yekushandisa modhi patent, ine chaiyo Positioning uye inomhanyisa kurwisa kumhanya kwemasekondi 2.6, yaive yakarumbidzwa zvikuru nevatengi!
Muna 2018, isu takaparura chikepe zvakare, uye takagadzira nekugadzira aseismic inotsigira uye hanger, yakazara pombi rack rack inoteedzana zvigadzirwa.